ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စီထိုးနှံပြီးဖြစ် - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးနေရာ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများအား ဇူလိုင် ၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေ ၁၆ သန်းအနက်မှ ၁၃.၁၃ သန်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အတွင်းဝန်နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Or Vandine က စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအနက် လူဦးရေ ၁၀.၈၈ သန်း သို့မဟုတ် ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးများ အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၈၆၉,၆၈၀ ဦး သို့မဟုတ် ၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး (booster dose) ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အစီရင်ခံစာ၌ ပြောကြားထားသည်။
“စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်အထိ ရည်မှန်းထားတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀ သန်းရဲ့ ၉၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အောက် ရည်မှန်းထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ၂ သန်းနီးပါးရဲ့ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အောက်အရွယ်ရှိ ရည်မှန်းထားတဲ့ကလေးငယ် ၁.၉ သန်းနီးပါးရဲ့ ၇၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စီ ထိုးနှံပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု Vandine က ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ၌ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးအဓိကပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက် တက်ချိုဟွန်ဆန် (Samdech Techo Hun Sen) က ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာလမတိုင်မီ လူထုကိုယ်ခံစွမ်းအား ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“အားကောင်းသော ရောဂါကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကုသရေးဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်း ကောင်းမွန်စွာတိုးတက်နေသည်နှင့်အညီ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက စက်တင်ဘာ၂၅ ရက်နှောင်းပိုင်း၌ ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၌ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရက်ရောစွာပံ့ပိုးမှုအတွက် နှစ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံစုံပါဝင်သော မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်၌ COVID-19 ရောဂါအသစ်ဖြစ်ပွားသူအသစ် ၈၃၉ ဦးရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၀၉,၉၂၆ ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာလည်း ၁၈ ဦးထပ်မံရှိလာသဖြင့် စုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၂,၂၆၁ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူအရေအတွက်မှာလည်း ၅၃၀ ဦးထပ်မံရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ၁၀၁,၁၈၅ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။ (Xinhua)
82 pct of Cambodia’s population receive at least one COVID-19 vaccine dose
Source: Xinhua| 2021-09-27 23:55:56|Editor: huaxia
PHNOM PENH, Sept. 27 (Xinhua) — Cambodia has administered at least one dose of COVID-19 vaccines to 13.12 million people, or 82 percent of its 16-million population, health ministry’s secretary of state and spokeswoman Or Vandine said on Monday.
“As of Sept. 26, some 98.8 percent of 10 million targeted adults, 89 percent of nearly2million targeted adolescents aged from 12 to under 18, and 78.6 percent of almost 1.9 million targeted children aged from6to under 12 have taken at least one vaccine dose,” Vandine said.
“With good vaccination progress in combination with strong containment and treatment measures, Cambodia looks ahead toagradual reopening of sustainable and inclusive social and economic activities,” he said inaspeech delivered to the 76th Session of the UN General Assembly via videoconference late on Saturday.
Additional 530 patients recovered, taking the total number of recoveries to 101,185, the ministry said. Enditem
Photo : People wait to receive COVID-19 vaccines at an inoculation site in Phnom Penh, Cambodia on July 2, 2021.(Photo: Xinhua)